Uyenza njani ibhlog yokupheka kumanyathelo ama-3 | ThermoRecipes
Uyenza njani ibhlog yokupheka ngamanyathelo ama-3
Ufuna yenza ibhlog yakho yokupheka kwaye awazi njani? Kulungile ke ungakhathazeki, kwiThermorecetas siza kukunceda wenze ibhlog yokupheka iiresiphi ukusuka ku-0 nangaphakathi Amanyathelo ali-3 alula ziyafumaneka kuye wonke umntu nokuba bengenalo ulwazi malunga ne-Intanethi okanye itekhnoloji.
Into yokuqala oyifunayo ukuseta ibhlog yokupheka yile khetha i-domain ofuna ukuyisebenzisa. Idomeyini iya kuba ngumfanekiso wakho kunye negama kwi-intanethi ngoko ke yinto ebaluleke kakhulu kwaye kufanelekile ukuchitha ixesha elithile ukhethe elungileyo, kuba kamva ungayitshintsha kodwa ngumsebenzi onzima lowo kwaye kuya kufuneka ingcali ukukunceda.
Ukukhetha indawo elungileyo yebhlog yakho ngundoqo
Ezinye iingcebiso zokukhetha indawo elungileyo yebhlog yakho:
Khetha igama elingu kulula ukukhumbula, oko kuthetha into. Umzekelo, ukuba igama lakho nguSara kunokuba yinto efana ne- lasrecetasdesara.com okanye efanayo.
Zama ukwenza i-domain mfutshane kangangoko njengoko oku kuyakwenza lula ukukhumbula.
Ngu-lokanye icace gca. Ukuba ibhlog yakho imalunga nokupheka iiresiphi, igama lesizinda kufuneka liyenze icace kuye nabani na oyifundayo ukuba yibhlog yere recipe.
Faka amagama aphambili ngaphakathi kwesizinda. Ukuba ibhlog yakho imalunga needesika zama ukubeka igama elithi "iidessert" kwindawo yakho, njenge todosmispostres.com okanye efanayo.
Sebenzisa i .com ukwandiswa, kuba yeyona isetyenziswa kwihlabathi liphela. Kwimeko yokwenza iwebhusayithi kuphela eSpain unokukhetha i-extensions .es kodwa ungaze usebenzise izandiso ezinqabileyo okanye ulwandiso oluvela kwamanye amazwe.
Nje ukuba igama likhethwe, inyathelo elilandelayo liya kuba yibhalise egameni lakho. Nantsi ingcebiso yethu kukusebenzisa u-Godaddy, kuba lelinye lamaqonga lawo elona xabiso liphezulu kunye nazo zonke iziqinisekiso. Ukubhalisa i-domain yakho kufuneka Cofa apha, beka igama olikhethileyo (jonga kuqala ukuba alikho na, kuba ukuba likho kuyakufuneka ufumane elinye igama) kwaye ulihlawule.
Ngoku une unikezo olulodwa kutheni unako Thenga indawo ye .com ye € 0,85 kuphela ngokunqakraza apha
Amanyathelo okuthenga i-domain
Kwezi skrini zilandelayo siza kubona inyathelo ngenyathelo lokuthenga i-domain kwiqonga likaGodaddy.
Amanyathelo 1 no 2
Ngenisa iwebhusayithi ye-godaddy, bhala igama lesizinda kwaye ucofe kwiqhosha lokukhangela ukuze ubone ukuba ngaba i-domain ikhona okanye ayikho.
Ukuba isizinda siyafumaneka ngoko unethamsanqa. Ngoku nqakraza kwiqhosha lokukhetha.
Cofa kwiqhosha qhubeka nokuqhuba ukuqhubeka nenkqubo yokuthenga.
Inyathelo 5 nele 6
Indica inani leminyaka ukuba ufuna ukuthenga i-domain (sincoma ubuncinci iminyaka emi-2) kwaye emva koko ucofe ku "qhubeka nentlawulo". Ukusuka apha kuya kufuneka ubhalise kwiwebhu kuphela kwaye uya kuba nakho ukwenza intlawulo ngokulula ngekhadi lekhredithi okanye i-paypal.
Kwaye kunjalo. Ngoku kuthweni sele unayo i-domain kuthengiwe siza kubona inyathelo elilandelayo: ukusingathwa.
Khetha indawo efanelekileyo yokubamba iindwendwe
Nje ukuba sinesizinda, inyathelo elilandelayo liya kuba thenga ubamba kakuhle. Kule meko ingcebiso yethu kukusebenzisa iinkonzo ze Iinethiwekhi zeRaiola ngumboneleli waseSpain onika inkonzo esemgangathweni ngexabiso elifanelekileyo kunye ne-100% yenkxaso ngeSpanish. Ukufikelela kwiwebhusayithi yeRaiola kunye nokuqesha eyona ndawo yokusingatha cofa apha. Unendawo yokubamba iindwendwe eyi- € 2,95 ngenyanga!
Amanyathelo okuthenga ukusingathwa
Njengokuthenga i-domain, siza kuchaza inyathelo ngenyathelo ukuba uthenga njani ukubamba kakuhle.
Inyathelo 1 nele 2
Ngenisa iwebhusayithi yeRaiola kwaye cofa kwimenyu Ukusingatha> Ukusingathwa kweWordPress.
Khetha isicwangciso sokubamba esifanele iimfuno zakho. Nantsi ingcebiso yethu thenga isicwangciso nge- € 6,95 ngenyanga ngokuba namandla kakhulu ngexabiso elifanelekileyo.
Inyathelo 4, 5 no-6
Bhala igama lethambeka okhe walithenga kwiwebhusayithi yakho. Kwinqaku 5 kuya kufuneka ubonise ukuba ufuna ukufaka iWindowsPress (kuyacetyiswa ukuba usoloko ufaka ingxelo yokugqibela) kwaye njengenyathelo lokugqibela kufuneka ucofe nje kwiqhosha Qhuba iodolo. Ukusuka apha kufuneka ugcwalise ubhaliso njengomthengi omtsha kwaye kunjalo.
Xa sele silapha, sele siyithengile isizinda kunye nokusingathwa.
Faka umphathi womxholo
Kanye ngeli xesha, inyathelo elilandelayo liya kuba faka umphathi womxholo ukuze ukwazi ukupapasha iiresiphi kwibhlog yakho. Akukho mathandabuzo, olona ngcebiso lubalaseleyo WordPress, isixhobo esilawula uninzi lweeblogi zehlabathi kwaye ikwayile nto siyisebenzisayo eThermorecetas (Qaphela: I-WordPress inokufakwa ngokuzenzekelayo kwinyathelo lokuthenga lokusingathwa, kodwa kwimeko apho siza kukuxelela ukuba ungayenza njani kamva).
Ukufaka iWindowsPress kwi-hostage yakho entsha awudingi naluphi na ulwazi lobuchwephesha. URaiola unesixhobo esifakelwe ngokungagqibekanga esikuvumela ukuba faka iWindowsPress ngokuchofoza oku-4 ngokulula. Ukuba ufuna ukubona ukuba ungayenza njani, nantsi ividiyo echaza yonke inyathelo ngenyathelo ngenyathelo.
Yila ibhlog yakho
Ewe, ibhlog yakho sele ilungile. Ngoku ufuna kuphela fumana uyilo oyithandayo kwaye yonke into iya kugqitywa. Xa sifuna uyilo sinokukhetha ezimbini:
Sebenzisa i Uyilo olukhululekileyoI-WordPress inamakhulu ezinto ezikhululekileyo onokuzifaka ngokulula kwibhlog yakho kwaye uqalise ukuzisebenzisa. Igama layo lobugcisa yimixholo kwaye uyayibona yonke ikhathalogu ukungena kweli phepha.
Sebenzisa i uyilo lwentlawulo: Le iya kuba lolona khetho lucetyiswayo ukusukela ngaphezulu nje kweedola ezingama-40 sinokuba noyilo lobuchule bebhlog yethu. Emva koko ndiza kukubonisa ezinye.
Umxholo weWP weeresiphi
Uyilo lobungcali kwaye ngokugqibeleleyo elungiselelwe iiblogi zokupheka. Ungayikhuphela kwi- $ 48 ucofa apha.
Ukutya kunye neRipipe WordPress Umxholo
Olunye uyilo olwenzelwe ngokukodwa ukupheka iibhloko. Yintoni egqithisile ilungelelanisa ngokugqibeleleyo ii-mobiles kunye neepilisi Ke ibhlog yakho iya kujongeka intle kulo naluphi na uhlobo lwesixhobo. Ixabisa kuphela iidola ezingama-48 kwaye ungayithenga ngokunqakraza apha.
Nje ukuba ufikelele kweli nqanaba, ibhlog yakho sele ilungile kwaye kufuneka uqale ngokupapasha iiresiphi zokuqala.
Apha siza kukunika amaqhinga ambalwa okuphumelela kwiwebhusayithi yakho entsha.
Uyicwangcisa njani ibhlog yekhitshi eliyimpumelelo?
Fumana ibhlog yeresiphi eyimpumelelo!
Iifoto zibalulekile kwibhlog yokupheka. Ayinamsebenzi ukuba iresiphi yakho iyamangalisa ukuba ifoto ehamba nayo ayisiyomgangatho. Uya kudinga ukuthatha iifoto ezinomtsalane kwaye ngenxa yoku kukho iingcebiso eziluncedo njengokusebenzisa imvelaphi engathathi hlangothi (ngokukhethekileyo emhlophe), iipleyiti zoyilo olutsha kwaye zibonelela ngokukhethekileyo. Ewe, soloko ukhumbula ukuba iresiphi kufuneka ibe ngumlinganiswa ophambili wesithombe.
Yongeza i-watermark enegama lebhlog yakho kwiifoto. Oku kuyakunceda abafundi bakho ukuba bakhumbule iwebhusayithi yakho kwaye kwangaxeshanye bathintele ezinye iiwebhusayithi ekubeni bazisebenzise ngaphandle kwemvume yakho.
Landela a Ipateni efanayo ukuthatha zonke iifoto (ubungakanani obufanayo, imvelaphi efanayo enemibala, njl.njl.) Ukuze abasebenzisi bakho baqonde isitayile sakho.
beka enye ifoto yesitya esigqityiweyo ekuqaleni kweresiphi. Ke ukuba uyafuna ungabeka iifoto zangaphakathi ngamanyathelo aphakathi ekufuneka uwalandele, kodwa ifoto yokuqala umfundi ahlala eyibona kufuneka ibe yeyeresiphi egqityiweyo.
Nika eyakho Ukuthinta ngokwakho iresiphi. Kwi-intanethi kukho amawaka eeresiphi ukuze wazihlule kuya kufuneka ukongeze ixabiso kubafundi bakho. Nika umnxeba wakho okhethekileyo kwisitya ngasinye kwaye uya kufumana abaphulaphuli abathembekileyo abaya kukufunda yonke imihla.
Sebenzisa a ithoni esondeleyo. Abafundi bakho ngabahlobo bakho, thetha nabo ngokungathi ngabahlobo bakho ubomi bakho bonke ngesandi esisondeleyo neshushu. Ngokuqinisekileyo baya kuyixabisa!
Kwaye konke! Ngoku sinokunqwenela wena kuphela Ngethamsanqa ngebhlog yakho entsha kwaye unokufikelela kwimpumelelo emininzi.